Izifundo zabelaphi bezokwelapha 2020 - Ukuqeqeshwa Komqondo
Izifundo zabelaphi bezokwelapha 2020
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izinsiza » ukuqeqeshwa » Izifundo zabelaphi bezokwelapha 2020
Kuleli thebula uzothola izifundo okuhloswe ngazo abelaphi abazokhuluma ngo-2020.
Ngokuchofoza imicibisholo eseduze kwekholomu ngayinye ongakwazi oda itafula ngokuya ngaleyo paramitha (usuku, idolobha, inani lemininingwane, uthisha ...). Ungasebenzisa futhi i ibhokisi lokusesha ngakwesokunene sokukhawulela imiphumela kwigama elilodwa elingukhiye (isib: "Milan", "Stuttering").
I-Per bika isifundo sakho (noma inkambo oyithandayo) bhalela i-imeyili [Email protected] Ngemininingwane elandelayo: Igama lesifundo, Usuku, Indlunkulu, Othisha (aba), Izindleko, ECM. Ukuhlela umzimba, Xhumanisa nohlelo.
NB: leli khasi lenziwa ukuze kuvunyelwe ukuseshwa okusheshayo phakathi kweziphakamiso zoqeqesho e-Italy. Azikho kulezi zifundo ezifundiswa yi-Cognitive Training futhi asikwazi ukubhalisa esifundweni. Ukuze ubhalise esifundweni, ngakho-ke, kudingeka uchofoze isixhumanisi ekugcineni komugqa ngamunye.
NB2: Izifundo ngaphansi kokuvunyelwa kwe-ECM funda amagama athi ND (Undefined). Izifundo ukuthi non qagela ukuthi i-ECM izoba nesibalo (-).
Mese Corso Usuku / e sede Mfundisi / s ECM Izindleko Umhlinzeki isixhumanisi
Izifundo ze-ECM zochwepheshe bezengqondo 2020
Amathuluzi wewebhu wamahhala wezinkulumo zokwelapha, izazi zezengqondo nothisha
Ukubuyekezwa - Ukuqeqeshwa kwengqondo kokuqonda komqondo kanye…
Ukubuyekezwa - I-LA STABBIE NAMUHLA: yakha umfelandawonye…
Ungase futhi ube nentshisekelo ku: Ukubuyekezwa - I-LA STABUZIE NAMUHLA: yakha ubumbano phakathi komndeni, odokotela, othisha nabelaphi bezokukhuluma
izifundo, ECM, ukuqeqeshwa, odokotela bengqondo
Izifundo zabelaphi bezokwelapha 20202019-07-252020-01-07http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttp://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2018/04/international-conference-1597531_960_720.jpg200px200px
Izifundo ze-ECM zochwepheshe bezengqondo 2020ukuqeqeshwa